Amanqaku kaMark Emond athi Martech Zone |
Amanqaku ngu UMark Emond
As Ibango leNtwasahloboUMsunguli kunye noMongameli, uMarko unomdla omkhulu wokunceda iinkokeli zentengiso ukuba ziguqule iindlela zabo zokuThengisa iRhafu, ukubenza babe ziinkokheli zobuchule kwimibutho yabo. UMark uyakuthanda ukucebisa kunye nokufundisa abathengi indlela yokuphuhlisa phambili, kodwa inyanzelekile, kwiindlela zokuthengisa kunye nokuvumela ukuba benze amaqonga etekhnoloji adibeneyo okuhambisa ubuqu, ukubandakanyeka kwamajelo amaninzi kwizinga.
NgoLwesibini, Septemba 28, 2021 NgoLwesibini, Septemba 28, 2021 UMark Emond
Kunyaka olandelayo, ukuThengisa okuZenzekelayo kuguqula ama-30! Ewe, ufunda ngokuchanekileyo. Kwaye ngelixa kubonakala ngathi le teknoloji ikuyo yonke indawo isencinci ngokwaneleyo ukuba isenamaqhakuva, inyani kukuba iqonga lokuzenzekelayo (MAP) ngoku litshatile, linenjana, kwaye kunokwenzeka ukuba liqale usapho kungekudala. Kwingxelo yophando yakutshanje yeMfuno yeNtwasahlobo, sivavanye imeko yetekhnoloji yokuthengisa oomatshini namhlanje. Siveze ukuba phantse isiqingatha semibutho sisokola ngokwenene